हाम्रो समाजका हरेक व्यक्ति परिवार छोडेर श्रम गर्न जानु, बिहानदेखि बेलुकासम्म श्रम गर्नु, विदेशिनु लगायत सबै अवस्था सन्ततिको सुन्दर भविष्य निर्माणको लागि हो । बालबालिकालाई पिटिरहेको कुनै अभिभावकलाई सोध्यो भने पनि उसको भविष्यको चिन्ताले उसलाई सुधार्न वा राम्रो बनाउने उद्देश्यले पिटेको, बाँधेको, थुनेको भन्नुहुन्छ । हामी अभिभावक बालबालिकाप्रति कति धेरै संवेदनशील छौं प्रष्ट हुन्छ ।
अब प्रश्न आउँछ – हामीले बालबालिकाको भविष्यको लागि गरेको यतिधेरै मेहनत साँच्चिकै ठीक ढंगबाट उनीहरूमा पुगिरहेको छ त ? स्कूलमा शिक्षकले विद्यार्थीलाई सभ्य र दक्ष बनाउनको लागि हरदम प्रयास गरिरहनुभएको हुन्छ । हरेक समय विद्यार्थीलाई सम्झाउने, सहयोग गर्ने र पाठ्यक्रमले निर्देशित गरेको विषय विद्यार्थीसम्म पुर्याउन हरेक कोणबाट प्रयत्न गरी नै रहनुभएको हुन्छ । छिमेकी लगायत हरेक ठूला मानिसले बालबालिकालाई सहीमार्गमा हिँडाउनको लागि हरेक क्षण सल्लाह, सुझाव र निर्देशन दिई नै रहनुभएको हुन्छ ।
खेल्दा, बोल्दा, पढ्दा यतिसम्म कि उसको लुगा लगाइ, कपाल र हिँडाइमा पनि हरेकपल सुझाव दिई नै रहेको पाइन्छ । यसरी दिइने हरेक सुझाव मूलतः बालबालिकाले गरेका कार्यलाई नकारात्मक ढंगबाट मात्र देखेर गाली गर्दै सम्झाउने कार्यमा हुने गरेको देख्न पाइन्छ ।
बिडम्बना बालबालिकाले गरेका सकारात्मक कामको प्रसंसा ज्यादै न्यून हुने गर्छ । प्रसंसा भइहाल्यो भने पनि अरुको नक्कल गर्यो, कसैले सिकाएर गरेको हो, उसँग त्यस्तो क्षमता नै छैनजस्ता नकारात्मक पक्षलाई अगाडि ल्याउन प्रयत्न गरिएको पाइन्छ । यहाँ मनन् गर्नुपर्ने विषय भनेको नै बालबालिकाद्वारा गरिने कुनै पनि कार्य कसैबाट प्रभावित भएर वा राम्रो सुझाव र सहकार्यबाटै हुने हो । बालबालिकालाई सधै ठूला मानिसको सुझाव, सहयोग र हौसलाले नै राम्रा कार्य गर्न प्रेरित हुने हुन् ।
हामी बालबालिकासँग लामो समय बिताउँदै कुरा गर्छौ, खेल्छौं, रमाउँछौं । अझ बढी उनीहरूलाई सम्झाउँछौं, आफूले जानेका कुरा सिकाउँछौ, सुनाउँछौं । उनीहरूसँग समय बिताएको पत्तै पाउँदैनौं । कतिधेरै समय उनीहरूको बिचमै हराउँछौं । बालबालिकासँग बिताएका पल हामी र बालबालिकाको लागि साँच्चिकै महत्त्वपूर्ण हुने गर्छन् । यसरी बालबालिकासँग समय बिताउँदा, रमाउँदा हरेक अभिभावक आफैंमा रमाउँछन् । आफ्ना सबै दुःख पीडा भुल्छन् । त्यसैले त बालबालिकालाई भगवानको रुपमा लिने गरिन्छ ।
यसरी बालबालिकासँग बिताएका पललाई हरेक अभिभावक, संरक्षक र शिक्षकले बालबालिकाको लागि दिएको समय भन्ने गरिन्छ । वास्तवमा यो उनीहरूको लागि दिएको महत्त्वपूर्ण पनि समय हो । यहाँ उठाउनको खोजेको विषय उनीहरूसँग समय बिताइरहँदा हामीले उनीहरूको लागि गुणस्तरीय समय खर्च गरिरहेका छौं त ?
गुणस्तरीय समय के त ? शिक्षकले दैनिक रुपमा कक्षामा बालबालिकालाई अध्यापन गराइरहनुभएको छ । त्यसबेला कुनै एकजना बालबालिकाको व्यवहार, लेखन, भाषा, उच्चारण, प्रस्तुति, गृहकार्य, लवज, अनुहार तथा उसको ड्रेसमध्ये कुनैमा ख्याल गरौं । उसको सबैभन्दा राम्रो पक्षमा सबैको अगाडि प्रसंसा गरौं । उसमा देखिएको परिवर्तन वा अप्ठ्यारोपन वा कमीको पहिचान गरौं र त्यसबाट उसलाई बाहिर ल्याउन प्रेरित गरौं । यो हप्तामा कुनै २ दिन, २ देखि ३ मिनेटको समय पनि पर्याप्त हुनेछ । यही २ मिनेटको समय नै गुणस्तरीय समय हुनेछ ।
केही दिन अगाडि नन्दी मावि काठमाडौंकी प्राचार्य गीता काप्mलेसँग मेरो साक्षात्कार भएको थियो । उहाँसँगको कुराकानीको अंश यहाँ सान्दर्भिक हुनेछ । एकजना शिक्षकले छुट्टि लिएकाले ५ कक्षाको १ घण्टी खाली थियो । त्यहाँ अर्काे शिक्षकले विद्यार्थीलाई अक्षर राम्रो बनाउन र पाठ सम्झन सजिलो हुन्छ भनेर कुनै पाठ लेख्न लगाइरहनुभएको थियो ।
गीता पनि कक्षा कोठामा पुग्नुभयो र सबैले लेखिरहेको ध्यानपूर्वक हेर्नुभयो । १ जना विद्यार्थीले २ वटै लाइनलाई छुवाएर लेखिरहेका थिए । उनले कुनै लाइनलाई खाली छोडेका पनि थिएनन् । हेर्दै गुजुमुजु र नबुझिने थियो । तत्कालै गीताले मोबाइलबाट फोटो खिच्नुभयो । त्यसपछि विद्यार्थीलाई माथिको लाइनमा मात्र छुवाएर लेखेर देखाउनुभयो र त्यसैगरी लेख्न प्रेरित गर्नुभयो । त्यसको १० मिनेटपछि पुनः विद्यार्थीको कापी हेरेर फोटो खिच्नुभयो । बालकको लेखाइमा ५० प्रतिशत सुधार भइसकेको थियो । यसरी उहाँले १ महिना उसलाई प्रोत्साहित गर्दै लेखाइमा सुधार ल्याउन प्रेरित गरेर हाल उसको लेखाइमा पूर्णसुधार भएको छ । वास्तवमा गुणस्तरीय समय भनेको यही नै हो । १ कक्षादेखि नै उसले त्यस्तै लेख्दै आएको थियो र हरेक दिन होमवर्क पनि गरेको थियो । यसलाई धेरै पटक गाली गरियो होला । तर उसको लेखनमा सुधारको लागि कसैको ध्यान नपुगेरै होला ... ?
कुनै विद्यार्थीको उच्चारण राम्रो छैन । कुनै लेख्दा आकार, उकार, इकार आदि छुटाउँछ । त्यसमा ध्यान दिएर उसलाई लेख्दा ध्यान दिन प्रेरित गरौं । देख्दा सामान्य तर १ जना बालबालिकाको लागि समस्या पहिचान र त्यसबाट बाहिर आउन दिएका सीप नै उसको लागि राम्रो अवसर बन्छ ।
अभिभावक वा शिक्षक जोसुकैले बालबालिकाले लेखेको हेरेर मात्र पुगेन, कुन पक्ष राम्रो हो त्यसको पहिचान गरौं र त्यसमा स्यावासी दिऊ । कमी कमजोरीमा सुधार गर्न प्रेरित गरौं र साथ दिऔं । हामी कुनै गल्ती गर्दा तत्कालै लामो प्रवचन दिन सक्छौं । गाली गर्न ५–१० मिनेट खर्च गर्न सक्छौं । तर उसलाई प्रेरित गर्न हामीसँग समय नभएको कुरा सजिलै व्यक्त गर्दछौं ।
हामीलाई कसैले कुनै दोष लगाएको बेला वा अरु कसैको अगाडि आफूभन्दा ठूलाले गाली गर्दा हाम्रो मष्तिस्कले उसले दिएको उपदेश वा गालीले कुनै असर गरेको हुन्छ ? अवश्य हुँदैन । त्यसैगरी बालबालिकालाई पनि कुनै पनि घटना भएकै बेला वा हामी उनीहरूप्रति नकारात्मक हुँदै सम्झाउनु भनेको व्यर्थ समय खेर फाल्नु हो । कुनै पनि बालबालिकालाई सम्झाउँदा वा उनीहरूसँग कुराकानी गर्दा पहिले आफैं सकारात्मक भावनाका साथ उपस्थित भएको हुनुपर्छ ।
बालबालिकामा पनि सहज अवस्थामा सकारात्मक पक्षको चर्चा गर्दै कुनै कमी कमजोरीबारे सहजताका साथ कुराकानीको थालनी हुनुपर्छ । जब सकारात्मक सोचका साथ कुराकानी अगाडि बढ्छ, परिणाम पनि सकारात्मक हुनेछ । यो नै वास्तवमा सार्थक वा गुणस्तरीय समय हुनेछ ।
बालबालिकाको साथमा सधैं बस्नु, खानु, सुत्न, खेल्नु, खुवाउनु पनि बालबालिकाको लागि दिएको महत्त्वपूर्ण समय हुन् । तर कहिलेकाहीँ हामी अभिभावक बालबालिकाले खाँदैन भनेर यो चिसोमा १ घण्टा घुमाइ–घुमाई खाना खुवाउने गर्छौ । हामीले खुवाउँदै गरेको खाना यति चिसो भइसकेको हुन्छ, सोही खानाले बालबालिकालाई चिसो लागेर निमोनिया वा पखालाजस्ता रोग लाग्ने अवस्थासम्म आउँछ । हामीले माया गरेको हो । तर पनि उसलाई गरेको मायाले उसैलाई बिरामी बनाउन सघाउ पुर्याएको हुन्छ ।
हामीले बालबालिकाको बोली, अनुहार र उसले गर्ने हरेक व्यवहार, चालचलन, सीप, क्षमता, राम्रो पक्ष तथा कमी कमजोरीलाई सुक्ष्म ढंगबाट नियालौं । उसमा आएको परिवर्तन वा तनावलाई आत्मसात गरौं । यदि तपाईले वास्तवमै उसलाई सुनेर उसको साथमा गुणस्तरीय समय खर्च गर्नुभएमा उसका राम्रा पक्षलाई बढाउँदै लैजानुपर्छ र सुधार गर्नुपर्ने पक्षलाई सजिलै पहिचान गर्न सकिने छ । जब समस्याको पहिचान गर्न बालबालिका र तपाई सफल हुनुहुनेछ ।
त्यसपछि उसलाई ती समस्याबाट निस्कन प्रेरित गरौं, हौसला दिउँ र सहयोगी बनौं । बालबालिकाका साथमा समय बिताइरहेका बेला उनीहरूका लागि गुणस्तरीय समय दिऔं । अब हामीले बालबालिकाको राम्रो पक्षको अझ विस्तार र सुधार गर्नुपर्ने पक्षको सुधारको प्रारम्भ हुनेछ ।